संखुवासभा सामूहिक हत्या : चार दिन बित्दा पनि घटनामा संलग्‍न पत्ता लागेन- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
संखुवासभा सामूहिक हत्या : चार दिन बित्दा पनि घटनामा संलग्‍न पत्ता लागेन
भाद्र २४, २०७८ दीपेन्द्र शाक्य
संखुवासभा — मादीमा भएको सामूहिक हत्या घटनामा संलग्‍न खोजीका लागि प्रहरीको पूर्ण शक्ति परिचालन भएको छ । तर घटना भएको ४ दिन बित्दा पनि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन । प्रहरीले स्थानीयबासिन्दा र संचारकर्मीलाई अनुसन्धान सकारात्मकतर्फ उन्मुख भइरहेको मात्रै बताउँदै आएको छ ।
घटना भएकै दिनबाट घटनास्थलमा संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरानका एसपी भीमबहादुर दाहालको नेतृत्वमा कुकुरसहितको विशेष प्रहरी टोली परिचालित छ । त्यस्तै, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरीको रिट टोली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभा र इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरको प्रहरी टोली अनुसन्धानमा छ । प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख डिआईजी अरुणकुमार बिसीसमेत घटनास्थलमा पुगेका छन् ।
यति धेरै प्रहरी परिचालन गरिए पनि घटना भएको चार दिनसम्म अपराधी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । केही 'क्लु' पत्ता लागेको प्रहरी स्रोतले बताए पनि अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले भने केही खुलाएका छैनन् । हत्याको कारण र हत्यारा फेला नपर्नुले सर्वसाधारणमा त्रास देखिएको मादी नगरपालिकाका मेयर विदुर लिङ्थेपले बताए । 'सर्वसाधारण त्रसित नहुनुहोस्,' उनले भने, 'अनुसन्धानमा सघाउनुस्, अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबले सहयोग गर्नु पर्छ ।'
एकै परिवारका ६ सदस्यको ‘सामूहिक हत्या’ अनुसन्धानमा प्राविधिक (टेक्निकल) कोणबाट ठोस उपलब्धि हात नपरेपछि प्रहरी अनुसन्धान मानवीय सुरु गरेको छ । घटना भएको हप्ता दिन र घटनापछिको २४ घण्टाको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) विश्लेषण गर्दा ठोस उपलब्धि हात नपरेको अनुसन्धान अधिकृतहरूले बताएका छन् ।
संखुवासभामा मारिएका ६ जनाकै सामूहिक अन्त्येष्टि
घटनास्थलदेखि करिब १० किलोमिटर दुरीमा रहेको दुई वटा बिटियस टावरबाट कनेक्ट भएका करिब सयभन्दा बढी सक्रिय मोबाइल नम्बरको विश्लेषण गर्दा शंकास्पद केही नदेखिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । त्यस क्षेत्रमा एनसेल र एनटीसी सेवा विस्तर भए पनि मृतक तेजबहादुर कार्कीको घर आसपास दुवै नेटवर्कको रेन्ज कम छ । कार्कीको घरदेखि केही माथि डाँडामा उक्लिएपछि मात्र दुवैको नेटवर्क राम्रो टिप्ने गर्छ ।
सीडीआरको १६ वटै विधिको रिपोर्टअनुसार घटना भएको हप्ता दिनभित्र केही नयाँ व्यक्तिहरू गाउँमा आए पनि प्रत्येकलाई सोधपुछ गर्दा हत्यासँग अहिलेसम्म कुनै 'कनेक्सन' भेटिएको छैन । तर अनुसन्धान टोलीले प्राविधिक कोणबाटै केही ‘क्लु’ भेट्ने आशामा अनुसन्धान भने गरिरहेको प्रहरीको दाबी छ ।
अनुसन्धान टोलीले मृतकहरूले चलाउने ३ वटा मोबाइलसमेत घटनास्थल र घरबाट बरामद गरिसकेको छ । प्राविधिक पाटोमा सहयोग गर्न सीआईबीबाट डिएसपी रुगम कुँवर नेतृत्वको टोली पनि यतिबेला घटनास्थलमै खटिएको छ । प्रहरीको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले दर्जनौं व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिइसकेको छ । घटनापछि गाउँबाट हराएका व्यक्तिबारे प्रहरीले सोधी खोजी गरिरहेको छ । सोमबार बिहान तेजबहादुर, उनका आमा पार्वता, श्रीमती मनमाया, बुहारी रञ्जना, नाति दीपक र नातिनी गोमाको हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेका थिए ।
संखुवासभा सामूहिक हत्या : शव पोष्टमार्टमका लागि बीपी प्रतिष्ठान पठाइयो
सामूहिक हत्याबारे सीआईबी अनुसन्धान
संखुवासभामा एकै परिवारका ६ जनाको हत्या
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७८ १८:२८
६ जनाकै शव पोस्टमार्टमका लागि धरान पठाइयो
भाद्र २३, २०७८ दीपेन्द्र शाक्य
संखुवासभा — बौद्धमानका श्रीमती र बुहारी आइतबार दिनभर बारीमा मकै भाँच्न गएका थिए । बेलुका छोरा, नाति–नातिनासमेत मिलेर उनले मकै छोडाए र सुत्न गए । बिहान थाहा पाउँदा भने परिवारका ६ जनाकै बीभत्स हत्या भइसकेको थियो । राति हल्लाखल्ला वा कोही कराएको आवाज नसुनेको बौद्धमान बताउँछन् । घटनाबारे गाउँलेले सुनाएपछि मात्रै उनले थाहा पाएका थिए ।
‘बेलुकी सँगै छोडाएर सुतेका थियौं,’ उनले भने, ‘बुहारीले आनन्दसँग बस्नु, हामी काम गर्छौं भनिरहन्थिन् । ९० वर्षको उमेरमा म एक्लो भएँ ।’ मृतक तेजबहादुर उनका कान्छा छोरा हुन् । जेठो छोरा झापामा बस्छन् । विदेशमा रहेका दुई नाति पनि फर्कंदै छन् । संखुवासभाको मादी–१ स्थित कार्की परिवारका ६ जनाको हत्याबारे अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोली घटनास्थल पुगेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक रुकमबहादुर कुँवरको नेतृत्वमा ३ जनाको टोली मादी पुगेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलका अनुसार शव मुचुल्का गरेर पोस्टमार्टमका लागि मंगलबार धरान पठाइएको हो । संघीय प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहाल नेतृत्वको टोलीले पनि अनुसन्धान थालेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा हत्यामा कुनै धारिलो हतियार प्रयोग नभई चिर्पट, दाउरा वा फलाम प्रयोग भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
शवको प्रकृति हेर्दा लखेटेर मारेको तर धारिलो हतियारभन्दा पनि ‘ब्लन्ट फोर्स’ प्रयोग भएको अनुसन्धानबाट देखिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवीनकुमार राईले बताए । ‘चिर्पट, दाउरा वा काठ अथवा कडा खालको फलामको वस्तु प्रयोग भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
घटनास्थलमा तालिम प्राप्त कुकुरको पनि सहयोग लिइएको छ । घटनामा संलग्नहरू भाग्न सक्ने सम्भावित नाकामा सोमबारबाटै निगरानी बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । उनका अनुसार गाउँबाट कसैलाई छिमेकी जिल्ला जान दिइएको छैन । तेजबहादुर कार्की, उनकी आमा पार्वता, श्रीमती मनमाया, बुहारी रञ्जना, नाति दीपक र नातिनी गोमाको शव सोमबार बिहान फेला परेको थियो ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७८ ०८:०९
संखुवासभा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा
मल अभावले तोरी छर्न पाएनन्
प्रदेशस्तरमा महिला आयोग गठन भएन
खुम्बुमा घुम्न गएकाको होटलमा मृत्यु
हलेसीमा चार महिनामै १२ लाख भेटी
अरुण तेस्रो आयोजनामा कार्यरत मजदुरको मृत्यु
सहरकै व्यस्त बसपार्क कहिलेसम्म सडकमा ?
सम्पादकीय मंसिर १७, २०७८
पुरानो बसपार्क रहँदै आएको राष्ट्रिय सभागृह पछाडिको ११ हजार ८ सय ९० वर्गमिटर जग्गा २०७३ सालमा बहुतले सपिङ कम्प्लेक्ससहितको बस टर्मिनलका लागि ‘काठमाडौं टावर परियोजना’...
प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन निर्विकल्प
राजुप्रसाद चापागाई मंसिर १७, २०७८
सामान्य समझ (कमन सेन्स) भएको व्यक्तिले ‘प्रधानन्यायाधीश’ भन्नेबित्तिकै खास विशेषतायुक्त व्यक्तिको कल्पना गर्छ । उच्च नैतिकतावान्, इमानदार, उदाहरणीय छवि भएको तथा न्यायप्रति समर्पित एवं संविधान, कानुन...
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका तीन प्रश्न
विश्व पौडेल मंसिर १७, २०७८
प्रश्न १ : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनसमाजमा पछाडि परेका व्यक्तिहरूलाई अगाडि ल्याउने वा तिनीहरूलाई जीवनको आधार तयार गर्न मद्दत गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो मुलुकमा २००७...
एमाले भनेकै केपी ओली !
उज्ज्वल प्रसाई मंसिर १६, २०७८
नेकपा एमाले र केपी ओली एकै भए । एमाले नामको पुरानो नेपाली राजनीतिक दल सर्लक्कै अध्यक्षको व्यक्तित्वमा सहवरण भयो । त्यसैले अधिकांश एमालेका लागि कार्टुनिस्ट...
पूर्ण खोप प्राप्त ८६,१३,८४७
अपडेटः शुक्रबार, १७ मंसिर, २०७८ । १६ : ०९ बजे